အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝ… – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနှင့် နွေဦးတော်လှန်ရေး၏ အဆင့်ဆင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 25K Share – 2955
2021-07-04 at 8:07 PM
We sport NUG
Nandar Lin Htin says:
2021-07-04 at 8:11 PM
Dr. Zaw Wai Soe ကျန်းမာ၍ အသက်ရှည်ပါစေ။ အသက်အန္တရာယ် ဘေးမှ ကင်းဝေးပါစေ။
Spring Nway says:
2021-07-04 at 8:15 PM
ဆရာကြီး ကို ပညာရေး ကျန်းမာရေးနဲ့မဆိုင်တာတေ လျှောက်လျှောက်ပြောတယ် troll ကြ blame ကြပေမယ့်
ဆရာကြီးရဲ့သဘောကို နားလည်ပါတယ် လေးစားလျက်ပါ🙏
DawThan Aye says:
2021-07-04 at 9:36 PM
Komyo Thant says:
2021-07-04 at 9:53 PM
Zaw Min Htet says:
2021-07-04 at 10:02 PM
PVTVက မေးတဲ့သူရဲ့လေသံနဲ့ အမေးတွေကို မကြိုက်ပူး
ကဲ ခုတော့ ရှင်းသွားပီမလား blame ချင်တဲ့သူတွေ
ဒီလူတေကို ခဗျားတို့ support လုပ်ရမှာကို အောက်ကိုပြန်ဆွဲမချပါနဲ့
NUG ရဲ့ ဝန်ကြီးဌာနစုံက သတင်းတွေကို စုစည်းထားပါတယ်။ နေ့တိုင်း (နေ့တိုင်း) ဆက်ပီး စုစည်းပေးသွားမှာပါ။
အဲ့က ပို့စ်တွေ များများပြန့်အောင် ဝေါပေါ် နေ့တိုင်း ဝိုင်းတင်ပေးကြစေချင်ပါတယ်ဗျ။
Page ကို ကြော်ငြာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထဲက NUG ရဲ့ ပို့စ်တွေကို ပြန့်စေချင်တာပါ။
U Khin Maung Soe says:
2021-07-04 at 10:58 PM
စကားတစ်လုံးချင်းစီးတိုင်း တန်ဖိုးရှိလှပါတယ် ဆရာ
Nwe Nwe Naing says:
2021-07-04 at 11:05 PM
2021-07-05 at 1:20 AM
2021-07-05 at 6:04 AM
အရေးတော်ပုံ မုချ အောင်ရမည် ဆရာ။
🙏🙏🙏 အလိမ်အညာမပာုတ်ပါဘူး။ ညီမတို့မိသားစုအဆင်မပြေ အိမ်လခနေနေသာသာ ထမင်းစားဖို့တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေလို့ပါ။တစ်နပ်စားလိုက်2ရက်3ရက်ငတ်လိုက်နဲ့😔 အစ်ကိုတို့ အစ်မတို့ wavemoney & kbzpay ထဲကအစွန်းထွက်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကူညီပေးကျပါလို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ 😔 လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လှူဒါန်းချင်တဲ့သူလဲအဆင်ပြေပါတယ် လိပ်စာ ဖုန်းဆက်မေးပေးပါ 🙏🙏🙏
Kbzpay Acc & Wavemoney Acc – 09409162252 🙏🙏🙏
はえうの さくら says:
အမည်မအလ အသက်65နှစ် အလုပ်ကိုင်.လူသတ်ခေါင်းဆောင်အရည်အချင်းရုရှားခရီးစဉ်အတွင်းသေနတ်ပစ်ဖိတ်ချီး.ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ.ဒေဝဒတ်လမ်းစဉ်
Khaing Mar May Win says:
2021-07-05 at 2:48 PM
စကားပြောတာပညာပါမှပါ ဟိုဘက်ရပ်ကွက် ပေါက်လွှတ်ပဲစားပြောချင်ရာလျှောက်ပြောာနေတဲ့ အပေးတူးတွေနဲ့ မိုးနဲ့မြေပဲ
2021-07-05 at 9:20 PM
U Kyee Taw says:
2021-07-06 at 2:32 PM
Win Thura Phyo says:
2021-07-06 at 6:03 PM
​မေးတဲ့​ကောင် နား​​ထောင်ရင်း နား​ထောင်ရင်း အဆင်မ​ပြေ​တော့ဘူး​နော် မင်း က questions ​တွေ နဲ့လိုချင်တဲ့ စကား​တွေ အစ်​နေသလိုပဲ..
2021-07-06 at 6:13 PM
Our Freedom says:
2021-07-06 at 7:20 PM
I respect to you.
May you be successful in all!
May you be free from dangerous!
The uprising must be succeeded.
Ko Maung KoMaung KoMaung says:
2021-07-09 at 1:41 AM
Rose NuNu says:
2021-07-09 at 1:16 PM
ပညာ႐ွိ စကားက တန္ဖိုး႐ွိလိုက္တာ
Mg Hla Oo says:
2021-07-11 at 5:58 AM
Min Yan Tu says:
2021-07-16 at 7:00 PM
မွန္ပါတယ္ဆရာ မွတ္ခ်က္ေနာ 1200ေလာက္က ျမန္မာမုာ ဘုရင္စစ္ႏူိစ္နဲ႔သြားေနတာေလ. အဲတုံးက နယ္ခ်ဲတဲ့စစ္နစ္ေလ ကမာၻႀကီးမုာဆုိေတာ့ ျမန္မာအဂ္လိပ္ေအာက္ေယာက္တယ္ ႏူိစ္ေပါင္းေလးဆယ္ အဂ္လိပ္ေတာ္တယ္ ျမန္မာမုာ ဘယ္ဆရာဝန္ ပဲဖစ္ျဖစ္ပါကမာၻကုိထြက္ကူသဘုိ႔ အခြင္အေရးရခဲ့တယ္ဗ် အဲေခတ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ လက္က္ထက္ေပါ့ ေငြလဲ အာ႐ုမုာတန္ဘုိးအ႐ုိဆုံူပါ စစ္တပ္ဆုိတာ နယိင္ငံတကာမုာ႐ုိ႔ပါတယ္ အဲကမာာၻ့ႏူိင္ငံေတြကစစ္တပ္က ကုိယ္ႏူိင္ငံကုိအက်ဳိးျပက်တာေလ. ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏူိင္ငံက စစ္တပ္က ဘာလုိ႔ျပည္သူကုိတပ္ေနတာပါလဲဗ် အာနာဆုိတာ မတည္ျမဲပါဘူးဆုိတာ ျပည္သူေတြကထားပါ တပ္တြင္းကုိလဲ ျပည္သူနဲ႔အသူသူပဲဗ်
2021-07-16 at 7:02 PM
တပ္ထဲက စစ္တည္ေတြက ဗုံးခြဲ ဏန္ေတြမုာ ေလ ျပည္သူကလက္နက္မရလုိ႔ ရရင္စစ္တပ္ပဲဦးတည္တယ္ဗ်
2021-07-16 at 7:03 PM
ျပည္သူေတြမအေတာ့ဘူး ဘာေၾကာင္လဲသိလား ဂိန္ကစားေနရလုိ႔ပါ
2021-07-16 at 7:06 PM
နစက က အုိပစ္အတြက္ ဘာမု မလုပ္ႏူိင္ဘူးဗ်
Aung Mawmaw says:
2021-07-18 at 2:04 AM
Gz တေကိုချနင်းပြီးနေရာယူနေတဲ့ NUG ထွီ
United XYZ အဖွဲ့မှတဆင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ လှူဒါန်းနိ…